Erling Håland oo shaaca ka qaaday daafaca ugu adag ee wajahay & Xiddiga ku guuleysan doona abaal-marinta Ballon d’Or sanadka 2025 – Gool FM
Erling Håland oo shaaca ka qaaday daafaca ugu adag ee wajahay & Xiddiga ku guuleysan doona abaal-marinta Ballon d’Or sanadka 2025
(Dortmund) 04 Maajo 2020. Weeraryahanka qaab ciyaareedka sare ku jira ee Erling Håland ayaa shaaca ka qaaday daafaca ugu adag ee uu ka hortagay, isagoo sidoo kale sheegay in xiddig aan isaga ahayni uu ku guuleysan doono abaal-marinta Ballon d’Or sanadka 2025.
Haaland ayaa sheegay in Lionel Messi uu ku guuleysan doono abaal-marinta Ballon d’Or sanadka 2025-ka, waxaana sidoo kale uu xusay in daafaca Liverpool ee Van Dijk uu yahay kan ugu adag ee uu ka hortagay.
Weeraryahankan ayaa bandhig aan caadi ahayn ka sameeyey xilli ciyaareedkan kooxda Red Bull Salzburg si la mid ah markii uu kooxda Borussia Dortmund bishii Janaayo ugu soo biiray adduun dhan 17 milyan oo gini.
Laacibkan ayaa si xoog leh loola xiriirinayey Kooxda Manchester United inkastoo dhowaan uu u saxiixay naadiga ka ciyaarta horyaalka Bundesliga, sidoo kalena waxaa xiiseynaya kooxo dhowr ah oo ka dhisan qaaradda Yurub kuwaasoo indhaha ku haya horumarka uu sameynayo xiddigan.
19-sano jirkaan ayaa ka qeyb qaadanayey barnaamij su’aalo iyo jawaabo ah oo shabakadda ESPN ay ku qabatay barta Instagram-ka.
Dhaliyahan waxa la weydiiyey xiddiga ugu adag ee uu wajahay waxaana uu ku jawaabay in xiddigaasi uu yahay daafaca Liverpool ee Virgil van Dijk.
Halaand ayaa xiddigan reer Holland ku wajay labo jeer tartanka Champions League heerkiisa guruubyada weliba horraantii xilli ciyaareedkan, markaasoo ciyaaryahankan uu ka tirsaa Salzburg.
Markii la weydiiyey ciyaaryahanka ku guuleysan doona abaal-marinta Ballon d’Or sanadka 2025 –ka, waxa uu go’aansaday inuusan isagu qudhiisa is-dooran waxaana uu shaaciyey in kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi uu hanan doono kaasoo horay ugu guuleystay abaal-marintaan lix goor oo kala duwan.
Daafaca PSG ee Kimpembe oo magacaabay Weeraryahanka ugu adag ee uu ka hor tagay
RASMI: Loris Karius oo ku laab doona Liverpool, iyo sababta ka dambeysa inuu burburiyo heshiiskii Beskitas